Barclays 1.96 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.96 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား ေငြေရးေၾကးေရး Barclays
Barclays ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါ Barclays app ကို
သငျသညျ 16 သို့မဟုတ်ကျော်နေနှင့်သင်တစ်ဦးကိုဗြိတိန်မှတ်ပုံတင်မိုဘိုင်းနံပါတ်နှင့်တစ်ဦး Barclays လက်ရှိအကောင့်ရှိပါကမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ သင်သည်သင်၏ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုချွတ် 16 ဂဏန်းအရေအတွက်ကလိုပါလိမ့်မယ်, သင် PINsentry နှင့်အတူတစ်ခုသို့မဟုတ် Barclays ငွေသားစက်ကိုမှာသင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦး activation code ကိုရရှိပါသည်ရှိလျှင်, (သင်ဒီ PINsentry မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်) မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့မြင်ကွင်းပေါ်ရှိခြေလှမ်းများလိုက်နာပါ။
သငျသညျကို set up နေပြီးနောက်, သင်သာထိုအခါသင်သည်အနာဂတ်အတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကို log in လုပ်ဖို့က Android လက်ဗွေကို set up နိုင်ပါတယ်။ ဝငျရောကျဖို့သင့် 5-ဂဏန်းပတ်စ်ကုတ်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီ app ကိုအမြစ်တွယ်ကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
•သင်က Android လက်ဗွေမှတဆင့် access ကိုဖွင့်ထားသောအခါလျင်မြန်စွာနဲ့လုံလုံခြုံခြုံထဲမှာ Log
•သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးအကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲ, သင်၏ Barclays ပေါင်နှံအကောင့်ရှုမြင်အဖြစ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Barclaycard အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲ
•သင်တို့ရှေ့မှ paid င့်ကလူနှင့်သင့်ပေးချေမှုရရှိသူစာရင်းထဲတွင်လူတွေကိုငွေပေးချေမှု Make
•လွှတ်တင်ခြင်းမျိုးနှင့် Barclays တိမ်တိုက်ဒါဟာနဲ့လုံလုံခြုံခြုံသင့်ရဲ့အရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုသိမ်းဆည်းထား။ ရုံစတိုးဆိုင်သင်လိုချင်သောစာရွက်စာတမ်းများဓါတ်ပုံများယူသင့်ကင်မရာကိုသုံးပါ
•မိုဘိုင်း PINsentry သုံးပြီးပိုမိုလွယ်ကူစွာအွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းသို့ Log ။ ဒါကြောင့်ငါတို့သည်အချို့သောလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်မိုဘိုင်း PINsentry အဆိုပါ app ထဲမှာ activated ခံရဖို့အဘို့ဟု4ရက်အထိကြာလိမ့်မယ်
•တစ်ခုအကြံပေးဖို့စကားပြောဖို့ app မှတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်န်ဆောင်မှုအသင်း Call
• 1 လုံခြုံ log-in နှင့်သင်၏ Barclays ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးအကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲ
• apps များအများကြီးကို log in လုပ်ဖို့မလို - သင့် app ထဲမှာ, အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့လုံလုံခြုံခြုံအခြားဘဏ်များနှင့်အတူကျင်းပသင့်လက်ရှိအကောင့်ရှုမြင်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခွအေနမြေားသက်ဆိုင်ပါသည်။ သင်က Barclays app ကိုသုံးစွဲဖို့ 16 သို့မဟုတ်ကျော်အသက်ရမည်ဖြစ်သည်။
for Business အကောင့်
သင်တစ်ဦးတစ်ဦးတည်းသော-လက်မှတ်ရေးထိုး Barclays စီးပွားရေးလက်ရှိအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူနေလျှင်သင်သာအပလီကေးရှင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ Barclaycard လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်အကြွေးကတ်များမှတ်ပုံတင်ရန်လို့မရပါဘူး။
ဒီ app ကိုသင်ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်နှင့်အတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပေမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းပေါ် မူတည်. Barclays ဘဏ်ကိုဗြိတိန် PLC သို့မဟုတ် Barclays ဘဏ် PLC ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ သငျသညျမှဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတရားဝင် entity အတည်ပြုပေးရန် (စသည်တို့ကိုအသုံးအနှုန်းများနှင့်အခြေအနေများ, ထုတ်ပြန်ချက်များ,) သင့်ဘဏ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုပါ။
မူပိုင်ခွင့်© Barclays 2019. Barclays လိုင်စင်အောက်တွင်အသုံးပြုသော Barclays plc ၏မှတ်ပုံတင်ကုန်သွယ်မှုအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။
Barclays ဘဏ်ကိုဗြိတိန် PLC ။ အဆိုပါ Prudential စည်းမျဉ်းဥပဒေအာဏာပိုင်များက Authorized နှင့်ဘဏ္ဍာရေးကျင့်အာဏာပိုင်နှင့် Prudential စည်းမျဉ်းဥပဒေအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုမှတ်ပုံတင်မည်အမှတ် 759676) ကထုတ်ပြန်ချမှတ်။
အင်္ဂလန်မှာမှတ်ပုံတင်ထား။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် 9740322 မှတ်ပုံတင်ရုံး: 1 Churchill ၏နေရာ, လန်ဒန် E14 5HP ။
Barclays ဘဏ် PLC ။ အဆိုပါ Prudential စည်းမျဉ်းဥပဒေအာဏာပိုင်များက Authorized နှင့်ဘဏ္ဍာရေးကျင့်အာဏာပိုင်နှင့် Prudential စည်းမျဉ်းဥပဒေအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုမှတ်ပုံတင်မည်အမှတ် 122702) ကထုတ်ပြန်ချမှတ်။
အင်္ဂလန်မှာမှတ်ပုံတင်ထား။ အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်ပြီး။ 1026167 မှတ်ပုံတင်ရုံး: 1 Churchill ၏နေရာ, လန်ဒန် E14 5HP ။
Barclays အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Barclays အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Barclays အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Barclays အား အခ်က္ျပပါ
india-market စတိုး 48.83k 20.73M
Barclays ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Barclays အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.96
ထုတ်လုပ်သူ Barclays Bank PLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.barclays.co.uk/ImportantInformation/Privacypolicy/P1242557966945
လက်မှတ် SHA1: CE:D4:AC:E6:21:36:44:A5:E7:C8:0A:1C:B7:B7:4B:42:6A:03:FA:51
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Barclays Bank PLC
အဖွဲ့အစည်း (O): Barclays Bank PLC
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): NA
Barclays APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ